Ego Huawei nwetara site na 40% maka ọkara mbụ nke afọ | Gam akporosis
Huawei afọ a emeela ka ị gaa n'ihu na-ewepụta mbipụta ọhụrụ nke ọdụ ya ndị ama ama ma bupụta ihe ọhụụ na ya flagship dị ka igwefoto abụọ ahụ na azụ maka foto monochrome dị elu. Ọ na-egwu kaadị ya nke ọma, ebe ọ maara na ya nwere ịnyịnya na-emeri, ya mere n'afọ a, ọ dị ka ọ na-aga maka ọmarịcha mma ọzọ yana ụfọdụ ọnụọgụ ahịa nke nwere ike imebi nke abụọ kachasị ere ahịa n'ụwa, Apple.
Ma ọ bụ na onye nnukwu China ka mara ọkwa ọnụ ọgụgụ nwere ike ikpughe ndị nrụpụta ndị ọzọ chere na ha mere ya niile site na ịhapụ afọ ọzọ na-enweghị isi ọhụụ na ekwentị ha. Huawei kwuru na ya toro site na 40% na ntinye ahia ke akpa ọkara nke 2016. Ọ bụ naanị a 10 percent mma tụnyere otu oge oge afọ gara aga. Ya mere ọ bụrụ na nke ahụ bụ obere ụjọ ma ọ bụrụ na onye bụ onye na-eburu otu n'ime ụlọ ọrụ abụọ ahụ dị n'elu, Samsung mbụ na nke abụọ Apple.
N'ime ọnwa 6 gara aga, ụlọ ọrụ enwetawo ijeri $ 36.800 ma ọ kwesịrị ịkwado mmegharị a, nke ga-etinye ya na ebumnuche nke $ 75.000 nde site na njedebe nke 2016. Ndị a bụ ọnụ ọgụgụ na-agbanahụ anyị niile, mana ha na ndị ụlọ ọrụ ndị a nọ na esemokwu mmeghe iji gosi ọnọdụ ndị ahụ ndị isi nke ndị na-ere ahịa nke smartphones na mbara ala.
Huawei kwukwara na ọ setịpụrụ ihe mgbaru ọsọ na agwụ 2016 na a dị ezigbo mma ndetu na ego, enweta site na ihe ịga nke ọma nke arụmọrụ gị ugbu a. Sabrina Menga, CFO nke ụlọ ọrụ ahụ, gbakwunyere na onye nrụpụta ahụ enwetala ọganihu na atọ nke otu azụmahịa ya, nke mere na ọnụnọ ya zuru ụwa ọnụ na-agbakwunye ọnụ ọgụgụ na ọnụ ọgụgụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei na-aga Apple, ọnụ ọgụgụ ego ya na-ebili 40%
Nintendo Shares Fall Mgbe Investors Chọpụta Ọ Zụlite Pokémon Gaa